आखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाइँ पनि चकित पर्नु हुन्छ ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारआखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाइँ पनि चकित पर्नु हुन्छ !
November 9, 2020 admin समाचार 3855
अमेरिकी किसानहरुले यसरी निकै डरलाग्दो गरी गाईको पेटमा प्वाल पार्ने गर्दछन । किन यसरी पसुलई दुख दिएका होलान यी अमेरिकनले भनेर बुझ्दै जाँदा यो त नयाँ र अचम्मको प्रविधि पो रहेछ ।यसो गर्नुको कारण पनि बडो आस्चर्यलाग्दो नै छ। यो अनौठो र डरलाग्दो जिउँदो गाइकै पेटमा ठुलै प्वाल पर्नुको कारण गाईको आयु बढाउन र स्वास्थ्य जाँच गर्न सहज पर्न रहेछ ।
पशुबिज्ञ र वैज्ञानिकहरुका लागि गाईको स्वास्थ्य र भित्री भागको जाँच गर्न कठिन हुने हुँदा यो प्रविधि अपनाएर सहज पर्न यस्तो गरिएको रैछ। गाईको पेटमा यसरी प्वाल पारिसकेपछि एउटा पलास्टिकको रिङले यसलाई बन्द गरिन्छ । यो प्रक्रियाको मद्दतले वैज्ञानिकहरुले गाईको पाचन प्रक्रियाको बारेमा धेरै जानकारी सहज रुपमै प्राप्त गर्न सक्छन् ।यसले मुख्यगरी गाईका लागि कुन खाना सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ र पेटमा के-कस्ता ब्याक्टेरियाहरु छन् भनेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । गाईको शरीरमा यस्ता प्वाल जुन भागमा बनाइएको हुन्छ त्यसलाई रुमेन भनिन्छ ।
December 26, 2020 admin समाचार 1375
ईलाम । ईलामको सुर्योदय नगरपालिका–१२ आठघरेका मदन राई लामो समयदेखि कृषि पेसामा छन् । उनले ठूलो क्षेत्रफलमा व्यवसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानी खेती गरेर मनग्य आम्दानी पनि गर्दै आएका छन् । वर्षको झण्डै १० लाख रुपैयाँको
ज्योतिषशास्त्रअनुसार बुधबार गर्नुहोस यी ४ कार्य, खुल्नेछ भाग्य!
November 18, 2020 admin समाचार 4340
हिन्दु धर्ममा बुधबार श्री गणेशको दिन मानिन्छ। श्री गणेशलाई ज्ञान र शुभताका ​​भगवान् भनिएको छ। गणेशले भक्तहरूको जीवनका सबै समस्याहरू हटाउँछन्। यसै कारणले गणपति बप्पालाई विघ्नहर्ता पनि भनिन्छ। प्रत्येक कार्यमा पहिला गणेशको पूजा गरिन्छ। यसो
December 29, 2020 admin समाचार 2575
काठमाडौँ । कक्षा १२ मा अध्यानरत एक युवतीको गोप्य भिडियो बाहिरिएको छ । ती युवतीले आफ्नो प्रेमीसँगको गोप्य भिडियो लिक भएको हो । उक्त भिडियोमा महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौ’न आसन जस्तो देखिन्छ । उनीहरुले गोप्य
LEX 18 agenda conversation: Job club (544581)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515031)
Hello world! (435998)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398445)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109019)